E-News Nepali || Fast and Accuracy » केशव भट्टराई र दीपक क्षेत्रीलाई श्र’द्धाञ्जलि दिन पुगेका कलाकारहरुको चल्यो रुवाबासी !
केशव भट्टराई र दीपक क्षेत्रीलाई श्र’द्धाञ्जलि दिन पुगेका कलाकारहरुको चल्यो रुवाबासी !
काठमाडौं : नेपाली चलचित्र क्षेत्रका दुई हस्तीको नि’धनले सारा नेपाली म’र्माहत भएका छन। शनिबार कलाकार दीपक क्षेत्री र आइतबार राति कलाकार तथा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईको नि’धनले कलाक्षेत्र सहित सारा नेपाली दुःखी भएका छन् । चलचित्र विकास बो’र्डको का’र्यालयमा दुवै कलाकारको पा’र्थिव शरीर अ’न्तिम श्र’द्धाञ्जलीका लागि राखिएको छ ।
श्र’द्धाञ्जली व्य’क्त गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोख्रेल पनि पुगेका छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि श्र’द्धाञ्जली व्य’क्त गरेका छन् । श्र’द्धाञ्जली व्य’क्त गर्न कलाकारहरुको ठू’लो उ’पस्थिति छ । दुवै जनाको आजै पशुपति आ’र्यघाटमा अ’न्तिम सं’स्कार गरिने छ ।५२ वर्षका भट्टराईको हृ’दयघातका कारण नि’धन भएको ओम अस्पतालले जनाएको छ ।
टेलिचलचित्र तथा चल चित्रहरुमा अभिनय गरेका भट्टराईले आफ्नो मान्छे, छोडी गए पा’प लाग्ला, देवर बाबु, क’र्मयोद्धा, सो सिम्पल, ब्रासलेट, यात्रा सहितका चल चित्रको निर्माण समेत गरेका छन् । ५२ वर्षीय भट्टराई लामो समयदेखि नेपाली चलचित्रमा चरित्र अभिनेताको रुपमा अभिनय गर्दै आएका थिए। उनी चलचित्रका निर्माता पनि हुन।
प्रकाशित मिति ३० मंसिर २०७६, सोमबार १६:५७